ခေတ်ရှေ့ပြေးပြီး တီထွင်ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း Gadgets လေးများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingခေတ်ရှေ့ပြေးပြီး တီထွင်ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း Gadgets လေးများ
September 17, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ခေတ်ရှေ့ပြေးပြီး တီထွင်ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း gadgets လေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယနေ့ခေတ်မှာ နည်းပညာပစ္စည်းတွေဟာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေ အဖြစ် အတော်များများ နေရာ ဝင်ယူနေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လို နေ့စဉ်သုံး gadget လေးတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ကြောင်လေးတွေ အတွက် စမတ် အိမ်သာ
ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးချင်တာကတော့ အပျင်းကြီးတဲ့ ကြောင်မွေးသူတွေ အတွက် ဖန်တီး ပေးထားတဲ့ ကြောင် အိမ်သာလေးတစ်ခု အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို အပျင်းကြီးတဲ့ သခင် တွေ အတွက် အလုပ်မရှုပ်ရအောင် ကြောင်လေးတွေ အတွက် automatic အိမ်သာ လေးကို တီထွင်ပေးထားပါတယ် ။ ဒီ စက်ရုပ် သေတ္တာလေးဟာဆိုရင် စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အမျိုးအမည် ခွဲထားပေးထားနိုင်ပြီး အမှိုက်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှသာ ထုတ်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ယုံပါပဲ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ စမတ် ကွန်ဒုံး
ဗြိတိသျှ မှာရှိတဲ့ ကွန်ဒုံးကုမ္ပဏီ တစ်ခုဟာ နောက်ဆုံးပေါ် စမတ် ကွန်ဒုံး တစ်ခုကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ စမတ် ကွန်ဒုံးကို i.Con လို့ အမည်ပေးထားပြီး ကွဲပြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ် ။ i.Con စမတ်ကွန်ဒုံး မှာဆိုရင် အာရုံခံ ကိရိယာတွေ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ကြာချိန် ၊ လှုပ်ရှားမှု အမြန်နှုန်း ၊ အကြိုက်ဆုံး position ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အပူချိန် နဲ့ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှု စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စောင့်ကြည့်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး users အချင်းချင်း ကိုယ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေ အတွက် ဝေမျှနိုင်အောင် platform တစ်ခုလည်း ဖန်တီးပေးထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ စက်ရုပ် ပျား
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ Walmart ကုမ္ပဏီကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ စက်ရုပ် ပျား အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ စက်ရုပ် ကို ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ ရဲ့ အဆိုအရ ထို ပျား စက်ရုပ်တွေဟာ ပျားရည်ထုတ်တာက လွဲလို့ ကျန်တဲ့အရာတွေ အားလုံးကို တစ်ကယ့် ပျား အစစ်လိုမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီ ပျား စက်ရုပ်တွေရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ပိုမြှင့်တင် ပေးပြီး ကမ္ဘာ့နေရာ အများအပြားက စိုက်ပျိုးရေးတွေ နဲ့ အပင်တွေကို ပါ ကယ်တင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ Walmart ကုမ္ပဏီက ပြောထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ဖုန်းပြောတဲ့ အခါ ဘေးလူတွေ မကြားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ စက်
အခုပြောပြပေးမှာကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း gadget လေး တစ်ခု အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ gadget လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Hushme ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားတွေကို အပြင်မပေါက်ကြားအောင် လျှို့ဝှက်ချက် အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ဖုန်းပြောတဲ့ အခါ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို အနှောင့်ယှက် မဖြစ်စေပဲ စကားပြောလို့ ရအောင် လုပ်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ စက်လေးရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက အသုံးဝင်ပေမယ့်လည်း ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ အနည်းငယ် ပြုပြင်ဖို့ လိုနေပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ အိပ်နေရင်း မဟောက်အောင် တားပေးနိုင်တဲ့ Eye Mask
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ အိပ်နေရင်း မဟောက်အောင် တားပေးနိုင်တဲ့ Eye Mask အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တရုတ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ VVFLY ဟာ လူတွေ ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်း ပြဿနာတွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ လေ့လာခဲ့တာပါ ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ developers တွေဟာ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေပြီး ဟောက်တာကိုပါ တားပေးနိုင်တဲ့ gadget တစ်ခုကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ ဒီ စမတ် eye mask မှာပါတဲ့ အထူးတုန်ခါမှုဟာ ဝတ်ဆင်ထားသူကို အိပ်စက်နေတဲ့ အချိန်အတွင်း အသက်ရှုမှန်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် မဟောက် အောင်လည်း ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ အစားအစာတွေကို လတ်ဆက်ကြောင်း စစ်ပေးနိုင်တဲ့စက်
အခု နောက်ဆုံးပြောပြပေးမှာကတော့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ အစားအစာတွေကို စားတတ်တဲ့သူတွေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ စက်ကလေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ စက်လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ LinkSquare ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့ အစားအစာ ၊ အရည် နဲ့ အခြား ပစ္စည်းတွေကို အရည်သွေး ပြည့်မှီလားဆိုတာ စစ်ဆေးပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ စက်လေး နဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းနဲ့ စက်လေးကို ချိတ်ဆက်ပေးထားရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်သိချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို စက်လေးနဲ့ ထောက်လိုက်ရင် အရည်အသွေး ကောင်း၊ မကောင်း ပြောပြပေးမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ခေတ်ရှေ့ပြေးပြီး တီထွင်ထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း Gadgets လေးတွေ ထဲက တစ်ချို့ ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
သင့်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေမယ့် ထူးခြားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်များ